"သင်္ကြန်မှာ ကဲခွင့်မရလို့ စိတ်မညစ်ဘဲ နောက်နှစ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်အောင် ကျန်းမာအောင် နေကြဖို့ ပြောလာတဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ" - Cele Connections
“သင်္ကြန်မှာ ကဲခွင့်မရလို့ စိတ်မညစ်ဘဲ နောက်နှစ်မှာ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်အောင် ကျန်းမာအောင် နေကြဖို့ ပြောလာတဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ”
angella | 12/04/2020 | Celebrity | No Comments
MRTV-4 ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်တဲ့ “ချစ်ခြင်းတရားတို့ရှိရာနေရာ”ဇာတ်ကားထဲမှာ သက်သက်ဇော်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းဝတ်ရည်မေကိုတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့ ဇာတ်ကားတိုင်းလိုလို ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးချောလေးတစ်လက်ဆိုလည်းမမှားလောက်ပါဘူးနော်။ သူမဟာဆိုရင် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေတတ်ပြီး စကားပြောဆိုရာမှာလည်း ပွင့်လင်းစွာပြောတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရိုနာရောဂါတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် အနုပညာအလုပ်တွေ ခေတ္တအနားယူကာ အိမ်မှာနေရင်း အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဧပြီလ(၁၂)ရက်နေ့မှာ ဆောင်းဝတ်ရည်မေကတော့”အားလုံးပဲ..Happy New Year ပါ…. ဒီနှစ်သင်္ကြန်မကဲရလို့ စိတ်ညစ်မနေကြပဲ …နောက်နှစ်ကြမှ အတိုးပေါင်းပြီးကဲဖို့အားမွေးထားကြပါ ။ မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာအောင်နေကြပါ မြန်မာ့သင်္ကြန်နေ့လေးတွေမှာ အားလုံးပဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ရောဂါဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော် “လို့ဆိုကာ သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းဝတ်ရည်မေက သင်္ကြန်အတွက် သူမရဲ့ပရိသတ်တွေကို ဆုမွန်တောင်းကောင်းပေးလိုက်ကြောင်းကို တင်ပေးလိုက်တာပါပဲနော်။
CeleConnections ပရိသတ်တွေအတွက် ဆောင်းဝတ်ရည်မေရဲ့ ဆုမွန်တောင်းစကားနဲ့ အားပေးစကားလေးတွေကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သူမပြောသလိုဘဲ ပရိသတ်ကြီးတွေလည်း ဒီကိုရိုနာကနေ ရောဂါဘေးဘရာတွေကင်းဝေးကြပါစေနော်။
Soure…. Saung Wint Yee May’s Facebook
“သင်ျကွနျမှာ ကဲခှငျ့မရလို့ စိတျမညဈဘဲ နောကျနှဈမှာ ပြျောရှငျစှာ ဆငျနှဲနိုငျအောငျ ကနျြးမာအောငျ နကွေဖို့ ပွောလာတဲ့ ဆောငျးဝတျရညျမေ”
MRTV-4 ရုပျသံဇာတျလမျးတှဲဖွဈတဲ့ “ခဈြခွငျးတရားတို့ရှိရာနရော”ဇာတျကားထဲမှာ သကျသကျဇျောအဖွဈသရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ မငျးသမီးခြောလေး ဆောငျးဝတျရညျမကေိုတော့ ပရိသတျတှနေဲ့ ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ ဆောငျးဝတျရညျမကေတော့ ဇာတျကားတိုငျးလိုလို ကရြာဇာတျရုပျကို ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးခြောလေးတဈလကျဆိုလညျးမမှားလောကျပါဘူးနျော။ သူမဟာဆိုရငျ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနတေတျပွီး စကားပွောဆိုရာမှာလညျး ပှငျ့လငျးစှာပွောတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အားပေးမှုကိုရရှိထားတာပဲဖွဈပါတယျ။
ကိုရိုနာရောဂါတှဖွေဈပှားနတောကွောငျ့ အနုပညာအလုပျတှေ ခတ်ေတအနားယူကာ အိမျမှာနရေငျး အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဧပွီလ(၁၂)ရကျနမှေ့ာ ဆောငျးဝတျရညျမကေတော့”အားလုံးပဲ..Happy New Year ပါ…. ဒီနှဈသင်ျကွနျမကဲရလို့ စိတျညဈမနကွေပဲ …နောကျနှဈကွမှ အတိုးပေါငျးပွီးကဲဖို့အားမှေးထားကွပါ ။ မိမိကိုယျကို ကနျြးမာအောငျနကွေပါ မွနျမာ့သင်ျကွနျနလေ့ေးတှမှော အားလုံးပဲ ပြျောပြျောရှငျရှငျ နဲ့ရောဂါဘေးဘရာတှကေငျးဝေးကွပါစဆေုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော “လို့ဆိုကာ သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ဆောငျးဝတျရညျမကေ သင်ျကွနျအတှကျ သူမရဲ့ပရိသတျတှကေို ဆုမှနျတောငျးကောငျးပေးလိုကျကွောငျးကို တငျပေးလိုကျတာပါပဲနျော။
CeleConnections ပရိသတျတှအေတှကျ ဆောငျးဝတျရညျမရေဲ့ ဆုမှနျတောငျးစကားနဲ့ အားပေးစကားလေးတှကေို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ သူမပွောသလိုဘဲ ပရိသတျကွီးတှလေညျးဒီကိုရိုနာကနေ ရောဂါဘေးဘရာတှကေငျးဝေးကွပါစနေျော။
Covid – 19 ကြောင့် ဖခင်ကြီး ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့ သတင်းတွေကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ တေးရေး စောခူဆဲ
“အပြင်သွားမယ့်အချိန်တိုင်း ရေမွှေးကြိုက်လွန်းသူ သူမရဲ့ ရေမွှေးဆွတ်တဲ့ စတိုင်လေးကို ပရိသတ်တွေကို ချပြလာတဲ့ နေခြည်ဦးရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်”
“တွေ့ရမြင်ရကြားရ သတင်းဆိုးတွေကြောင့် နောက်ဆုံးကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ မေမီကိုကို”
” သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးဖြစ်ပေမယ့် အနုပညာကြေး​ပေးပြီးလာဘ်ခေါ်ဖို့အထိ ကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရကြောင်း အရွှန်းဖောက်ပြောပြခဲ့တဲ့ သံသာမိုးသိမ့်”